မှန်ထဲသေချာကြည့် ပီးရင် ကွကို ဘာသွေးနှောလဲ ဆုံးဖြတ် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeမှန်ထဲသေချာကြည့် ပီးရင် ကွကို ဘာသွေးနှောလဲ ဆုံးဖြတ်
မှန်ထဲသေချာကြည့် ပီးရင် ကွကို ဘာသွေးနှောလဲ ဆုံးဖြတ်
အဲ့နောက်တော့ ပေါက်ဖော်ကြီး က တစက်နှစ်စက် …. နရသီဟပတေ့ ဆီ လာရောတယ်
အဲ့ချိန် မြောက်ဦးမှာက ဘင်္ဂလားသွေး တဂါလံလောက်ရောနေလို့ ဘုရင်တွေတောင် ကုလားနာမည်တွေဘွဲ့ တွေ ယူ….ဒင်္ဂါးပြားထဲ ကုလားစာရိုက် ပီးထုတ်နေကြချိန်ပေါ့ …..သူရို့မျိုးဆက်ကို စစ်နိုင်ပီး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဒီဘက်ပင့်လာတော့ အဲ့သွေးတွေ ပါလာတာမှ တပျစ်တခဲ ….လေးသည်တော်သွေး သက်တော်စောင့်သွေး စသဖြင့်ပေါ့ …..မန်းလေး….မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး နား က ပလီက…လေးသည်တော် ဆိုသူတွေရဲ့ ပလီ ပဲ
သွေး အရောဆုံးက တောင်ငူခေတ် … …..ရတုဘုရင်….နတ်သျှင်နောင် ဆိုသူက
“တပ်တော်ဦးဆီမျှော် လိုက်ပြန်တော့…..ရဲတံခွန်တွေလေကစား ကြွားတလူလူဝေ….” (အာမင်).. ဆိုပီး ……အယူဝါဒပြောင်း……. ပျော်ပျော်ပါးပါး ပေါ်တူဂီသွေးတွေ လက်ခံနေတုန်း ဘုရင့်နောင်က သီဟိုကျွန်းက ဗုဒ္ဓစွယ်တော်အစစ်ကို လိုချင်လွန်းတော့ ရတနာလှေပို့ လက်နက်ပို့ တော့ ဟိုက တမီလ်သွေးတွေ ပြန်ပို့လိုက်တယ် စွယ်တော်ရမရကတော့ အငြင်းပွားစရာရှိပေမဲ့ တမီလ်ကုလားသွေး ရလာတာကတော့ သမိုင်းသက်သေ ရှိတယ်(နာမည်ကြီး…….လူသက်သေကတော့ ခု ….ဘုန်းကြီးဝတ်ကြီး နဲ့ မို့ အဘ မပြောတော့ပါဖူး..) …… မြေဒူးမင်းလက်ထက် စစ်သုံးပန်း တွေထဲမှာလဲ ဟိန္ဒူ မွတ်စလင် ခရစ်ယာန်တွေ စုံ မှစုံ….အဲ့သွေးတွေက စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲ တပျံတနှံ့ ….
တရုပ်စစ်သူကြီး နစရွတ်ဒင် တို့ ပန်းသေးသွေးတွေ ကချင်ဘက်မှာ ကျန်ခဲ့သလို ဘိန်းစား အားပေါက်တို့ရဲ့ ကွန်မြူနစ်တရုပ်သွေးလဲ ကောလင်း ဝန်းသို ဘက်မှာ တရောတနှော….ဗိုလ်ထီး မျိုးဆက်ရဲ့ ကသည်းသွေး ကလဲ မိုးညှင်း မိုးကောင်းဘက်တွေ မှာ ပျံပျံနှံ့နှံ…….အင်းဝကိုကုန်သွယ်လာတဲ့ ပန်ဂျပ် မလ်မန် ကုန်သည် တွေက မြန်မာ အလယ်ပိုင်းမှာ ခပ်ပျံပျံ…မဏိပူရအာသံ က ချင်းသွေးနဲ့ နှောလို့ ရုပ်ရည်သီးသန့်နဲ့ ပခုက္ကူ နယ်ဘက် ဘက် တစုတဝေး…အင်္ဂလိပ်ခေတ် သခင်ကြီး သမက်တော်ချင်တဲ့ ခေတ်ကရှိသေး …..အဲ့ချိန် ဘိုလမ်းနီးပီး ဘိုသွေးနှောရင် အကောင်ပဲ ဆိုတော့ နှောချင်သူကအများသား ….(ဘို ကို သမက် တော်….အိမ်ဦးခန်းတင်ထားပီး သခင်ကြီး လို့ အရသာရှိရှိ ခေါ်ခဲ့ တဲ့ ဗမာတွေ ဒုနဲ့ဒေး) …တချိ်န်ထဲမှာပဲ စီးပွားလာရှာတဲ့ ချစ်တီးကုလားသွေးနှောတွေ ရှိမရှိသိချင်ရင် ဂျပန်တော်လှန်ရေး သမား ရုပ်ရှင်မင်းသား သီဟ–….တို့မိသားစုကိုပဲကြည့်…… ….ဒါမှမဟုတ်လဲ မောင်ရင်တို့အိမ်နားဝန်းကျင်မှာလိုက်ရှာ …အသားမဲ မျက်ခုံးထူ မျက်တောင်ကော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေ ရှိရင် အဲ့တာသေချာပေါက် ချစ်တီးကုလား မျိုးဆက်…အပေါင်ဆုံး မရွေးနိုင်လို့ သမီးပေးလိုက်ရတာလား ဒါမှမဟုတ် ချစ်တီးရင်ဘတ်မွှေးကို ချစ်လွန်းလို့ပဲ သွေးနှောခံလိုက်တာလား…ငွေမက်လို့ပဲ ဘာဘူ ဘုတ်အချားဟဲ ဆိုပီး ငြိမ်ခံနေလိုက်သလား…တော့ ကွကိုသာ သွားမေး ….ဇေယျဝတီဘက် မှာလဲ အဂျေးဒီဗန်းတို့ အမီတာဘဂျမ်းတို့ သွေးတွေ ရွမ်းရွမ်းဝေ လို့…. အိန္ဒိယက ဆူဘတ်ချန်ဒြရာဘို့စ် တောင် ဂျပန်ကို တိုက်ဖို့ အိန္ဒိယ ကနေ ဇေယျဝတီဘက်ကို လူ လာစု ရတဲ့ အထိ ကို ရွမ်းရွမ်းဝေခဲ့တာ ……
စူရတီ သွေးက တော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ကြီး သက်သေပဲ…
.ဂျပန်ခေတ်မှာတော့ “မာစတာကြီးက အိမ်ကိုပြန် ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ကျန်”ဆိုတဲ့ စာချိုးတောင် ရှိသတဲ့
ဂျပန်သွေးနှောထဲတော့ ကိုခင်ဝမ်းကို အလေးစားဆုံးပါပဲ ….အေဒီ ၁၄ ရာစုလောက်က နမ္မတူဘော်တွင်း ဘက်ကို သတ္ထုလာတူးတဲ့ ပန်းသေးအုပ်စုသွေးကလဲ ရှမ်းနဲ့ ရောရောထွေးထွေး……
တရုပ်တန်းကတော့ ခမ်းခမ်းနားနားမို့ မင်းသိင်္ခကတောင် သူ့ဝတ္ထုတွေထဲ ဖွဲ့နွဲ့ခဲ့ရသေး
မျက်လုံးမှေးအသားဖြူ နှာတံတို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုရင် အားတီတို့သာကောတို့ သွေး တစက်နှစ်စက်တော့ သေချာပေါက်ပါတယ် …လောပန်ချန်ကေရှိတ်တို့ တတွေလဲ ရှမ်းတကြော သွေးနှောခဲ့တာပဲ သူရို့မျိုးဆက်ထဲက တချို့ဆို ခု တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ကြီး ကို ဖြစ်လို့…..ပင်လုံ ညီလာခံတောင် လာတက်နေသေး …ဒုကမ္ဘာစစ်အပီး တရုပ်ပြည်မှာ ငတ်ပြတ်နေလို့ မြန်မာပြည်ကူးလာတဲ့ ကူးလာတရုပ်သွေးကတော့ အခုမန်းလေးမှာ အိမ်ကြီးမြိုင်ကြီး ဟီးဟီးထ တွေနဲ့ အများကြီးပဲ ….ကွန်မြူနစ်အစစ် အ်ိမ်မှာအရက်ပုလင်းခေါင်းခုအိပ် မိုးနတ်မင်းကို တိုင်တည်ပြီး ချီးယာစ် တွေ ကမ်ပိန်တွေ လုပ်နေကြသူတွေက ခုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုလားပဲ ….သူရို့ကိုမျက်စိစပါးမွှေးမစူးအောင် ကျောင်းဆောက် ပရာဒိုလှူ…ဥပုဒ်နေ့တိုင်း အာရုံဆွမ်းလောင်းပြီး ညဦးပိုင်းကြ အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ ကြသတဲ့ ….(သာဓု ခေါ်လိုက်ပါအုံးမောင်ရင်ရဲ့ )
မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းက ဆလုံတွေ နဲ့ ပသျှူး တွေမှာလဲ မလေးသွေးက ဗလပျစ် ….
ကဲ မောင်ရင်….. အဘ မေး မကွဲ့……
အသားရောင် ဖြူလားမဲလား ညိုလား ဝါလား
မှန်ထဲသေချာကြည့် ……ပီးရင် ….
ကွကို ဘာသွေးနှောလဲ …..ဆုံးဖြတ် …..
အဲ့ဒါ …ကို မှ……သွေးမနှောသေးဖူးထင်ရင် ကိုယ့်ပါးကိုရိုက်ပီး
← စစ်​တပ်​ဟာ စစ်​တန်းလျားမှာပဲ​နေပြီး စစ်​တပ်​အလုပ်​ပဲ လုပ်​​နေခဲ့တဲ့ ပါလီမန်​ဒီမိုက​ရေစီ​ခေတ်​ ကာလတုန်းက မြန်​မာပြည်​ဟာ အ​ရှေ့ ​တောင်​အာရှမှာ ထိပ်​တန်းအဆင့်​ ရှိ​နေခဲ့တယ်​
PERMANENT PEOPLES’ TRIBUNAL in Rome Accepts Myanmar Muslims’ Request to hear about Myanmar’s crimes against Muslims →